COVID-19 နှင့် ရွေးချယ်ခံ အစိုးရ - Yangon Nation News
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ ဥက္ကဌ အဖြစ် တာဝန်ယူသည့် COVID-19 ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီနှင့်
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေမှ ဥက္ကဌ အဖြစ်တာဝန်ယူသည့် COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ် တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ…..
တို့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ နှင့် ညီသည့်အပြင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေနှင့်လည်း ညီခဲ့ပါတယ်။
သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများဖြစ်ကြသည့် အဓိကဖြစ်သော ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက် များကိုထုတ်ပြန်ခြင်းသည်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ မှ ပေးထားချက်အခွင့် အာဏာများပင်ဖြစ်သလို…
ထုတ်ပြန် ညွှန်ကြားမူများသည် လည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ မှပေးထားချက်
ဒေသအစိုးရများ၏ အမိန့် ညွှန်ကြားချက်များသည်လည်း ဖွဲ့စည်းပုံ၏ ပေးထားချက် အခွင့်အာဏာများပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါ အား နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဦးဆောင်ပြီး ကာကွယ်ခြင်း၊ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ကုသရေးများ လုပ်ဆောင်ခြင်းများသည် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် ကပ်ရောဂါကို ထိန်းချုပ်နိူင်မည့် အောင်မြင်မူ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်လုပြီ..
တစ်နည်းအားဖြစ် ရောက်ရှိနိုင်ပြီဟု မှတ်ယူ၍ ရလောက်နေပါပြီ။
မိမိတို့အားလုံးက ဆက်လက်လိုက်နာကြရမှာက စည်းကမ်းတစ်ကျ နေမူ ထိုင်မူများရှိကြဘို့ နဲ့ အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီ ၏ လမ်းညွန်မူများ၊ အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ၏ လမ်းပြ ညွှန်ကြားပေါင်းစပ်ပေးမူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့များ၏ ညွှန်ကြားချက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား အလေးထား လိုက်နာကြဘို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ယခုအခါမှာ အထူးသတိပြု ကြရမှာက ယခု မေလ အတွင်းမှာ မိခင်နိုင်ငံကို ပြန်လာကြသူ မိမိတို့နိုင်ငံသားများသည် ညွန်ကြားမူများနှင့် ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း အားလုံးကို အလေးထားလိုက်နာကြဘို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီတစ်ချီမှာ မိမိတို့အားလုံး တစ်စိတ် တစ်ဝမ်းတည်း ဖြင့် တက်ညီ လက်ညီ ရုန်းလိုက်ကြရင် ဖြင့် မိမိတို့ နိုင်ငံသည် လက်ခမောင်းခတ်နိူင်ရပေမည်မှာ ဧကန်မုချ ပင်ဖြစ်ပေမည်။
ကပ်ရောဂါကို အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီဆိုလျှင် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ လူမူ စီးပွား၊
စားရေး နေမူ ထိုင်မူ အစစ အရာရာကို
ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ များဆီသို့ လည်း တွဲလက် ညီညီဖြင့် တက်လှမ်းကြရအုန်းမှာက အစိုးရ၊ လွှတ်တော် ၊တပ်မတော်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအပါအဝင် မိမိတို့ နိုင်ငံသားအားလုံး၏ မွေးရာပါ တာဝန်များပင် မဟုတ်ပါလား ?
COVID-19 ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးအား မိမိတို့ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားအားလုံးမှ စည်းလုံးခြင်းသည် နိုင်ငံ့ခြံစည်းရိုး၊ စုပေါင်းခြင်းသည် မည်သည့်အရာကိစ္စကိုမဆို အောင်မြင်စွာ ခုခံ ကာကွယ်နိုင်သည့် အင်အား အဖြစ် ဆုပ်ကိုင် ဖြေရှင်း နေချိန်မှာ…..
နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားပြည်သူများအတွက်ကျရောက်လာမည့် အန္တရာယ်ဆိုးများကို ခုခံကာကွယ်ပေးပါမည်ဟူ၍ သစ္စာပြု ဂတိပေး ဖွဲ့ စည်းထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများအဖြစ် ဥပဒေနဲ့အညီ ဖွဲ့စည်း ထူထောင်ခွင့်ရ ရှိထားသော ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဌ မှ…
တပ်မတော်က စနစ်တကျ စီစဉ်ထားသည့်…
(Quarantine ) စခန်းများတွင် ဝင်ရောက်မူ နည်းနေသည့်အပေါ် နားမလည်ဖြစ်ရဟု ပြောဆိုခြင်း၊
ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးသံသယ ရှိခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဆင်းရဲချမ်းသာ လူနေမူအဆင့် အတန်းပုံစံ အမျိုးမျိုး နှင့် အကျင့်စရိုက်အမျိုးမျိုး
ရှိကြ၍ စုပေါင်းနေထိုင်ရချိန်တွင် အဆင်မပြေမူများရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်လက်သန့်စင်မူ လုံလောက်စွာ ပြုလုပ်နိုင်သော Camp များတွင် ပိုမိုနေလိုကြမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခြင်း…
တွေ့ရှိရတဲ့ ကိန်းဂဏန်းများအရ တပ်မတော်
(Quarantine ) စခန်းတွေရဲ့ စောင့်ရှောက်နိုင်စွမ်းဟာ အဟောသိကံ နီးပါး ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
ဟူ၍ ပြောကြားနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၎င်းသူသည် လက်ရှိအချိန်တွင် တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မူ မရှိတော့မူကြောင့် သူ့ထံ၌ တပ်မတော်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်မှာ တည်ဆဲ ဥပဒေများအရ မရှိတော့ပေ။
ထိုသူ၏ ပြောဆိုမူများကြောင့် တပ်မတာ်
ယခုလိုအချိန်ကာလတွင် နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခု၏ ဥက္ကဌ တစ်ဦးပြောဆိုမူသည်…
ပုဒ်မ(၁၂၄/က ) နဲ့ ပုဒ်မ (၅၀၅/ခ) ကို….
ယခုအချိန်ကာလမှာ Quarantine ဝင်ကြသူများက သူတို့ရောက်ရှိ အဆင်ပြေရာ နေရာများမှာသာ ဝင်ကြသည်ကိုတွေ့နေရပါတယ်။
ယခုအချိန်မှာ နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်မြို့ ရှိ စစ်ကြောရေးတည်းခိုရေးစခန်းများမှာ စောင့်ကြည့်လူနာ – နေပြည်တော်စစ်ကြောရေးနှင့် တည်းခိုရေးစခန်းတွင် (၃၁၇) ဦးနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လိူင်မြို့နယ် စစ်ကြောရေးနှင့် တည်းခိုရေး စခန်းမှာ (၈၅) ဦးတို့ ဝင်နေပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်သည်ကိုတွေ့ရပါတယ်၊
တိုင်းဒေသ – ပြည်နယ် အသီးသီးရှိ သတ်မှတ်နေရာများအသွားအလာ ကန့်သတ်သည့်နေရာ (၈၄၂၄) နေရာရှိပြီး၊ အသွားအလာကန့်သတ်ထားသူ ဦးရေ(၄၂၇၁၃) ရှိသည်ဟု မေလ(၂) ရက်ညနေပိုင်းတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
မိမိတို့ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်နေရသည့် ကူးစက် မြန်ကပ်ရောဂါ ဆိုးကြီးအားကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး အတွက် အဓိက တာဝန်မှာ အစိုးရ၏ တာဝန်ဖြစ်သလို အစိုးရဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအသီးသီးကလည်း သက်ဆိုင်ရာ (Sector) အလိုက် တာဝန်ခွဲဝေဆောင်ရွက် ကြရခြင်းသည် ဥပဒေ အရပေးထားချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်၊
သို့ပေမယ်လို့ ယခုမိမိတို့နိုင်ငံ၌ တွေ့ မြင် ကြားသိနေကြရသည်မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနဲ့အတူ အစိုးရဌာနအသီးသီးကလည်း တာဝန်အပြင် စေတနာအားများကိုပါ အားထည့် လုပ်ဆောင်နေကြတာကို တွေ့ရသလို လူထု၊ လူတန်းစား အားလုံးကလည်း စည်းစည်းလုံးလုံးဖြင့် ငွေအား၊လူအားများစွာဖြင့် COVID-19 အား စုပေါင်း ကာကွယ် တိုက်ခိုက်နေကြသည်မှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများစွာထဲမှာမှ တွေ့ရခဲသည့် အခြေအနေဖြစ်စဉ် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြည့်ဝ နေသည်က မိမိတို့ နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့အတူ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံသားပြည်သူများ၏ ကျေ ပြွန်လှသော တာဝန်ယူလိုမူများဖြစ်ပါတယ်။
COVID-19 အတည်ပြုလူနာများနှင့် စောင့်ကြည့်သူများအား ကာကွယ်၊ကုသနေကြရသလို ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးနဲ့တကွ ဆေးရုံအသီးသီးမှာလည်း အကြားမလပ်စေရန် အင်အား ဖြည့် ထည့်ကာ မခိုမကပ် တာဝန်များထမ်းဆောင်နေကြသည်မှာ…
အသက် (၂၄ မှ ၃၀) ကြား ဆရာဝန် ငယ်လေးများနှင့် သူနာပြုကလေးများ ဖြစ်ကြပြီး မည်သည့် အခွင့်အရေးမှမတောင်းဆိုကြပါဘဲ ရှေ့တန်းမှ တောင့်ခံ နေကြသည်မှာ အလွန်ပင် လေးစားမိ ကြရပါတယ်။
ရွေးချယ်ခံအစိုးရ၏ ဦးဆောင်မူနဲ့အတူ တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသား ပြည်သူ ပြည်သားအားလုံး၏ တာဝန်ယူမူ ၊တာဝန်ကျေပြွန်မူ အားလုံးသည်ကား မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေမည့် အနာဂတ် အလင်းတန်းများပင်မဟုတ်ပါလား ?
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ တွင်ပြဌာန်းထားသည့် အခန်း (၁၅) ခန်းမှ ပုဒ်မပေါင်း (၄၅၇) ခုထဲမှ တပ်မတော်နှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေပုဒ်မပေါင်း(၄၁) ခုနှင့် သက်ဆိုင်သည့်
MUST BE / MAY BE များအား ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးသားပါမည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြီးအား အမြန်ဆုံး ထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်၊ ကုသနိုင်သည့် နိုင်ငံအဖြစ် စောစောရောက်ရှိ – ရရှိစေကာ….
ရွေးချယ်ခံအစိုးရ… တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသား ပြည်သူများ… တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများ… တပ်မတော် နှင့် ဘာသာအသီးသီး – – လူမူ လူတန်းစားအဖွဲ့ အစည်းများသည် မိမိတို့နိုင်ငံအတွက် စည်းလုံး ညီညွတ် ကြပါစေကြောင်း တိုက်တွန်း နှိုး ဆော် ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။